कुकी नीति - ASFO स्टोर
कुकीज फाईलहरू हुन्छन् जुन सूचनाको टुक्राहरू समावेश गर्दछ जुन तपाईंको उपकरणबाट डाउनलोड गरिन्छ जब तपाईं वेबसाइट भ्रमण गर्नुहुन्छ।
ती वेबसाइट तपाइँको भ्रमण को लागी जानकारी याद गर्न मद्दत गर्दछ, जस्तै तपाइँको मनपर्ने भाषा र अन्य सेटिंग्स। यसले तपाईंको अर्को भ्रमणलाई सजिलो बनाउँदछ र वेबसाइटलाई तपाईंको लागि अधिक उपयोगी बनाउँदछ। कुकीजले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। तिनीहरू बिना, वेब प्रयोग गर्न को लागी एक धेरै निराशाजनक अनुभव हुनेछ। कुकीजले वेबसाइट नेविगेशनको दक्षता बढाउँछन्। निश्चित रूपमा तपाईले एउटा अनलाइन स्टोरमा किनमेल कार्टमा आईटम थप गर्नुभयो, र केहि दिन पछि, जब तपाइँ वेबसाइटमा फर्कनुभयो, के तपाईले आफ्नो कार्टमा फेला पार्नुभयो? यो कुकी को उपयोग को एक उदाहरण हो।
कुकीजहरू किन प्रयोग गरिन्छ?
इन्टरनेटमा कुकिजको प्रयोग सामान्य छ र सबै प्रयोगकर्ताहरूको कम्प्युटरमा हानी गर्दैन। कुकीहरूले धेरै प्रकार्य कार्यहरू गर्दछन् जसमा वेबसाइट मालिकहरूलाई उनीहरूको नेभिगेसन प्रदान गरेर कसरी प्रयोग भइरहेको छ भनेर बुझ्नमा मद्दत पुर्‍याउँछन्, साथै उनीहरूको प्राथमिकताहरू बचत गर्दछ र सामान्यतया तिनीहरूको प्रयोगकर्ता अनुभव सुधार गर्दछ र साथै वेबसाइटले प्रासंगिक सामग्री देखाउँदछ भन्ने कुराको सुनिश्चित गर्न।
हामी कस्तो प्रकारको कुकीहरू प्रयोग गर्छौं?
हाम्रो साइटले निम्न प्रकारका कुकीहरू प्रयोग गर्दछ: स्थायी कुकीज - यी कुकीहरू हुन् जुन तपाईंको पहुँच उपकरणहरू (पीसी, मोबाइल, र ट्याब्लेट) मा ब्राउजर स्तरमा भण्डार गरिन्छ र प्रयोग गरिन्छ जब तपाईं हाम्रो कुनै एक वेबसाइटमा फेरि जानुहुन्छ। सत्र कुकीहरू - यी अस्थायी कुकीहरू हुन् जुन तपाईको ब्राउजरको कुकी फाइलमा रहन्छ जब सम्म तपाईं वेबसाइट छोड्नुहुन्न। यी कुकीजले प्राप्त गरेको जानकारीले वेब ट्राफिक बान्कीको विश्लेषण गर्न कार्य गर्दछ, हामीलाई समस्याहरू पहिचान गर्न र उत्तम ब्राउजि experience अनुभव प्रदान गर्न अनुमति दिँदै।